monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်ကိုရှာပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » နည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » Array အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်ကိုရှာပါ
မကြာခဏမေးတယ် American Express
Tags: Binary Search ကို သွေးခွဲနှင့်အောင်နိုင် ရှာဖွေခြင်း
C ++ ပရိုဂရမ်တစ်ခုသည် monotonically တိုးပွားလာသော function ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဆောင်လာသည့်အချက်ကိုရှာရန်
Java ပရိုဂရမ်သည် monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဆောင်လာသည်
“ monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်နေရာကိုရှာပါ” တွင် function တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည် "int,f(လက်မှတ်မထိုး int x)" တစ် ဦး ကြာပါသည် အနုတ်လက္ခဏာကိန်းပြည့်မဟုတ် 'x' ကို input အဖြစ်နှင့်တစ် ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိ ကိန်း output အဖြစ်။ The function ကို ဆိုလိုသည်မှာf(x + 1) တန်ဖိုးသည် input x တိုင်းအတွက်f(x) ထက်သာလွန်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်f() သည်အပြုသဘောဖြစ်လာသည့် 'n' တန်ဖိုးကိုရှာပါ။f() monotonically တိုးပွားလာသောကြောင့်f(n + 1),f(n + 2) ၏တန်ဖိုးများသည်အပြုသဘောဖြစ်ရမည်၊f၏တန်ဖိုးများ (n-2),f(n-3) .. သည်အနုတ်ဖြစ်ရမည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအို (logn) အချိန်တွင် n ကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျမဆို input ကို x များအတွက်,f(x) အို (1) အချိန်အတွက်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်ယူဆလိမ့်မည်။
function (f) တစ်ခုပါသောပထမနှင့်လိုင်းတစ်ခုတည်း။
integer value ပါ ၀ င်သည့်ပထမနှင့်တစ်ခုတည်းသော line သည် monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဆောင်သောနေရာဖြစ်လာသည်။
ရှင်းလင်းချက်:f(x) အပြုသဘောဖြစ်လာသည့်နေရာ x သည် ၆ ဖြစ်သည်။
ဤနည်းလမ်းတွင်အဓိကစိတ်ကူးမှာ binary search ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် binary search အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမ့်ကျသောတန်ဖိုးများကိုလိုအပ်သည်။ algo အောက်တွင်တန်ဖိုးများကိုရှာဖွေ။ binary search ကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်ကိုပြသည်။
1.f(i) သည်သုညထက်ကြီး။ ၊ i တန်ဖိုးကိုနှစ်ဆတိုးသည်။ ပြီးတာနဲ့f(i) ကသုညထက်ကြီးတယ်၊ ပြီးရင် i ကိုအမြင့်ဆုံး၊ i /2ကိုအနိမ့်အမြင့်အဖြစ်ယူမယ်။
2. ယခု i /2နှင့် i ကြားတွင်f(i) ၏ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးကိုရှာပါ။ Binary ရှာဖွေမှု
3. မြင့်မားသောအမြင့်သို့မဟုတ်ညီမျှသည်အမြင့်မှီတိုင်အောင်, အလယ်ပိုင်းကိုရှာပါ
f (mid) သည်သုညထက်ကြီးပြီးအလယ်သည်အနိမ့်နှင့်ညီလျှင်f(mid -1) သည်သုညထက်ငယ်သည်သို့မဟုတ်ညီသည်ဆိုလျှင်f(mid> 0) && (mid == low ||f(Mid-1)) ) <= 0), ထို့နောက်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပြန်လာ
f (mid) သည်သုညထက်ငယ်လျှင်ညာဘက်တစ်ဝက်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေပါ။
f (mid) သည်သုညထက်ကြီးလျှင်၊ ဘယ်ဘက်တစ်ဝက်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေပါ။
အို (logn) - 'high' ကိုရှာရန်အဆင့်များမှာ O (Logn) ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် O (Logn) အချိန်တွင် 'high' ကိုရှာနိုင်သည်။ Binary Search သည် high /2နှင့် high အကြားကြာသောအချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ 'high' ၏တန်ဖိုးသည်2* n ထက်နည်းရမည်။ high /2နှင့် high ကြားရှိ element အရေအတွက်သည် O (n) ဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် Binary Search ၏အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုသည် O (Logn) ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုသည် O (Logn) ဖြစ်သော ၂ * O (Logn) ဖြစ်သည်။
အို (၁) ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာအရန်နေရာမဖန်တီးဘူး။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Array အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ Tags: American Express, Binary Search ကို, သွေးခွဲနှင့်အောင်နိုင်, အလယ်အလတ်, ရှာဖွေခြင်းpost navigation
ဖြစ်နိုင်သော R Element များ၏ပေါင်းစပ်မှုများအားပေးထားသော Array အရွယ်အစားအားပုံနှိပ်ပါ
Minimum Element ကို Sorted and Rotated Array တွင်ရှာပါ